Ukunqoba Amacala AseNkantolo 908
Ngiphonsa iziphonso zami ngosizo lwamandla okhokho bami ngokomoya, ukuphonsa kwami ​​iziphonso kwenziwa ngendlela eyingqayizivele ukusiza izinkinga zakho. Ukunqoba Amacala
Kuyisiphetho sami ukunikela ngeseluleko sami semilingo nesiqondiso esingokomoya sokusebenzela abanye. Impilo luhambo futhi ngamunye wethu ufanelwe ukujabulela ukuhamba. Yebo kuzoba khona ukuphakama nokwehla kulolu hambo kepha yindlela esibhekana ngayo nabaphansi nokuthi sizinqoba kanjani izithiyo ezingezinhle ezichaza ukuthi singobani futhi zichaze indlela yethu nesiphetho sethu. Ukunqoba Amacala AseNkantolo.
Ngingakusiza unqobe ubuhlungu benhliziyo yakho futhi ngikufundise ukuthi uzizwe kanjani futhi ukhule kanjani futhi ube nothando. Ake ngikusize ngezinkathazo zakho nezinkinga zakho futhi uqonde ukuthi yini okudingeka uyenze ukufeza ikusasa olifisayo. Amacala AseNkantolo.
Ngiyayizwa imicabango nemizwa yabanye. Ngingasebenzisa amandla ami ukubona imizwa kothandekayo wakho. Uma ngenza lokhu uzothola ukucaciseleka ebudlelwaneni bakho. Leli ithuluzi elinamandla okufanele lisetshenziswe ngokunakekelwa ngokweqile. Ukunqoba Amacala
PreviousSusa Izinkinga Zomshado